Boorsooyinka Patchwork: fikradaha, qaababka iyo in ka badan!
Shandaduhu waa mid kale oo ka mid ah farshaxannada ay jecel yihiin kuwa jecel qoqoboSidaa darteed, hoos waxaan ku tusin doonaa sida iyo waxa aad u baahan tahay si ay u sameeyaan boorso adiga kuu gaar ah. Haddii aad doorbidayso inaad soo iibsato bacaha balastarrada ee hore loo sameeyay, halkan ayaad ku samayn kartaa.
Sida loo sameeyo bacaha Patchwork
Haddii aad rabto inaad xidhato boorso cusub oo asal ah maalin kasta, halkan waa ikhtiyaarka ugu fiican. Samee bacaha Patchwork Waa mid ka mid ah fikradahaas weyn. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah maaha kuwo adag oo waqti gaaban waxaad awoodi doontaa inaad xirto qaabka boorsada ee aad jeceshahay. Laga soo bilaabo shandad gacmeed ilaa bacaha waaweyn. Adiga ayay ku jirtaa!.
Si aan u bilowno sameynta bacda Patchwork, waa inaan sameynaa dooro maro badan. Dhar midab leh ama daabacado kala duwan, ama kuwa aan ugu jecelnahay. Waa in aan ka fikirnaa qaabka ama nashqada aan doonayno in aan tafatiro. Si aad u bilowdo farsamadan, had iyo jeer way fiicantahay in la doorto in la gooyo dharka labajibbaaran ama leydi siman. Shandad dhexdhexaad ah, waxaad u baahan doontaa ilaa 48 leydi oo ku dhow 6 x 12 sentimitir.
Waxaad isku dari doontaa laba qaybood oo maro ah oo waxaad ku toli doontaa darafyada midkood. Kadibna, waxaanu ku biiri doonaa laba kale, ilaa aan ka samayno qaybo dhar ah. Xariijimahani waxay yeelan doonaan ballaca ay boorsadaadu sido.
Waa inaad samaysaa laba lakab. Taasi waa in la yidhaahdo, xagga hore iyo danbe ee bacda. Markaa shan saf oo xariijimo dhar ah ayaanu yeelan doonaa hal waji. Tani had iyo jeer waa wax qiyaas ah, sababtoo ah sida aan soo sheegnay, waxay ku xirnaan doontaa sida ballaaran iyo weynaanta bacda su'aasha. Waxaan u toli doonaa dhammaan xariijimaha si aan u dhamaystirno dhinac ka dibna dhinaca kale.
Marka aan hore u haysanno labada qaybood ama wejiyada boorsadayada, waxaan u baahan doonaa buuxin. maradii ayaanu dul saarnay oo u qaadnay mashiinka tolida si loo tolo. Si natiijadu u noqoto mid suuf ah. Waxaan ku sameyn doonaa isku mid labada dhinac ee bacda. Taasi waa, labada qaybood oo dhar ah oo leh laba buuxin.
Hadda waxaan u baahanahay dahaarka boorsadayada. Had iyo jeer waxaa lagula talinayaa in ay noqoto dhar isku dhafan midabka iyo in ay tahay mid cad ama qaab fudud si ay u soo baxdo. Waxaan ka tagi karnaa dhowr sentimitir oo dheeraad ah, si aan u tolo dhamaadka dharka boorsadayada. Markaa waxaa jira kala duwanaansho fiican.
Hadda bidix dahaarka tolo iyo dhammaan dhinacyada marka laga reebo hal, maadaama ay noqon doonto meesha aan bacda ku wareejin doono, si aan u aragno natiijada kama dambaysta ah.
Dabcan, waxaad sidoo kale samayn kartaa qaar ka mid ah gacan-qabsiga ku habboon dahaarka ama waxaad u dooran kartaa dhar kale. Xasuusnoow in gacan-qabashadu sidoo kale yeelan doonaan suuf yar.
Ka dib waxaan ku dhaafin cashar kale oo aad ku arki karto sida loo sameeyo bacda xajin:
DIY bacaha gallery
Si aad fikrado badan u hesho, halkan waxaa ah fikrado ah bacaha iyo bacaha nooc kasta ah si ay kugu dhiirigeliyaan marka aad dhaqan galinayso waxaad ku baratay talabadi hore:
Qaababka loogu talagalay bacaha Patchwork
Markaan ka hadleyno shandad gacmeedyo casri ah, waxaan tixraacnaa dhammaan kuwa leh qaababka iyo cabbirrada ugu badan ee hadda jira. Inkastoo sida aan ognahay, waxaa jira qaar badan oo runtii aan waligood ka bixin qaabka. Dhinaca kale, waxaan leenahay kuwa leh suunka garabka dheer iyo daboolka. Halka dhanka kale, qaabka wax iibsiga iyo sidoo kale bacaha had iyo jeer waa ikhtiyaar wanaagsan maalin kasta. Halkaan waxaad ka heli kartaa fikrado aan ku tusinno.
Haddii ay jirto dhar aan waligood ka bixin qaabka, markaa waxaan ka hadli doonaa denim ama cowboy. Wixii moodada ah waxay noqotay lama huraan laakiin ma aha oo kaliya qaabka dharka laakiin sidoo kale marka la eego qalabka. Sidaa darteed, waxaan ka faa'iideysan doonnaa surwaalka hore si aan u awoodno inaan sameyno hal abuur cajiib ah. Ma ku dhiiratay?.
ka boorsooyinka gacanta ee Japan way sahlan yihiin, badanaa waa la rogi karaa oo sidoo kale waa raaxo in la xidho. Sidaa darteed, qaar badan ayaa aad ugu eg boorsooyin yar yar. Sababtoo ah waxaan u baahanahay xoriyadda gacmahayaga iyo dhaqdhaqaaqayada.
Mashiinka dharka » Bacaha Patchwork